हलिउड Archives - नेपाल कुरा
हलिउड गृहपृष्ठमा जानुहोस् :
कान्स चलचित्र महोत्सवमा चलचित्र ‘टाइटेन’ सर्वोत्कृष्ट ठहर
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीपछि पहिलोपटक पूर्ण क्षमतामा भएको पहिलो चलचित्र महोत्सव कान्स सफल भएको छ । यो महोत्सव गएको वर्ष रद्द गरिएको थियो । चलचित्र महोत्सवमा फ्रेन्च–बेल्जियन चलचित्र ‘टाइटेन’ ले शीर्ष अवार्ड पाल्म डी ओर प्राइज जितेको छ ।[…..]
सुपरमोडल बेला हदिदले लगाएको फोक्सोजस्तो देखिने नेकलेसको विश्वभर चर्चा
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०७८, बिहीबार , संवाददाता: hina
काठमाडौं । अमेरिकन सुपरमोडल बेला हदिदले लगाएको मानिको फोक्सो जस्तो देखिने नेकलेसको विश्वभर चर्चा भइरहेको छ । सुपरमोडल बेला हदिदल नेकलेस फ्रान्समा भइरहेको कान्स फिल्म फेस्टिबलमा पहिरिएकी थिइन् । फिल्म फेस्टिबलको दोस्रो दिन रेड कार्पेटमा सुपरमोडल बेला कालो ड्रेसमा देखिइन्[…..]
मौरीसँग एन्जेलिना जोलीको फोटोशुट
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार , संवाददाता:
काठमाडौं । हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले मौरीसँग फोटो खिचाएकी छिन् । जोलीले विश्व मौरी दिवसको अवसरमा मौरीसँग फोटोशुट गरेकी हुन् । फोटोमा जोलीको शरीरमा मौरी टासिएको देख्न सकिन्छ । जोलीले यो फोटोशुट नेशनल जियोग्राफिकको सहयोगमा गरेकी थिइन् । फोटोशुटका दौरान[…..]
गर्भधारण लुकाउन गायिका एली गौल्डिङले अपनाइन् यस्तो उपाय, आफैले खोलिन् यस्तो रहस्य !
प्रकाशित मिति: १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार March 3, 2021 , संवाददाता: Yukta
काठाडमौँ । गायिका एली गोल्डिङले आफ्नो गर्भधारणको खबर लुकाउन उनले आफ्नो पति क्यास्पर जोपलिंगको कोटलाई छ महिनासम्म प्रयोग गरेको खुलासा गरेकी छिन् । डेलीमेल युकेको रिपोर्टका अनुसार ब्रिटिश कुक्री च्याट कार्यक्रममा बोल्दै एलीलाई सोधियो कि उनको गर्भधारण कस्तो भइराछ ?[…..]
पप गायिका रियाना फेरी बनिन् ट्रोलको शिकार, भगवान गणेशको लकेट लगाई गरिन् नाङ्गो फोटोशुट
प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । भारतीय किसान आन्दोलनको विषयमा ट्वीट गरिसकेपछि पप गायिका रिहाना अर्को ट्वीटको कारण विवादमा छिन् । रिहानाले सोशल मीडियामा आफ्नो एउटा टपलेस तस्विर पोष्ट गरेकी छिन् र यस तस्वीरमा उनले आफ्नो घाँटीमा भगवान गणेशको लकेट लगाएकी छिन् । फोटोशूट[…..]
चर्चित गायिका चेरिल बेकरलाई आर्थिक संकट, घरको फर्निचर समेत बेच्न भईन् बाध्य !
प्रकाशित मिति: २५ माघ २०७७, आईतवार February 8, 2021 , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । कोरोनको महामारी पछि धेरै मानिसहरू कंगाल भएका छन् । धेरै मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाए र बचतका साथ आफ्नो दिन बिताए । यस्तै व्यक्तिको सूचीमा आउँछन् प्रख्यात गायिका चेरिल बेकर । चेरिल बेकरले हालै बताइन् कि उनको वित्तीय अवस्था[…..]
हलिउडका चर्चित अभिनेता प्लमरको निधन
प्रकाशित मिति: २४ माघ २०७७, शनिबार , संवाददाता: hina
काठमाडौं । हलिउडका चर्चित अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमरको शुक्रबार निधन भएको छ । ५० वर्ष भन्दा बढी फिल्म क्षेत्रमा काम गरेका उनी फिल्म द साउण्ड अफ म्युजिक बाट चर्चामा आएका थिए । उनी सन् १९७० बाट फिल्म क्षेत्रमा लागेका थिए ।[…..]
फ्यानले आरोप लगाएपछि अनुहारमा कुनै सर्जरी नगरेको जेनिफरको दाबी
प्रकाशित मिति: १६ माघ २०७७, शुक्रबार , संवाददाता: Yukta
एजेन्सी । विश्वका चर्चित सेलिब्रिटीहरु आफ्नो अनुहारको चमक बढाउन सर्जरीको सहरा लिने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यसैबीच हलिउड नायिका, गायिका जेनिफर लोपेजमाथि पनि सो आरोप लाग्दै आएको छ । तर, ५१ बर्षकी यी सुन्दरीले भने आफूले अनुहारमा बोटक्स[…..]
पामेला एन्डरसनले गरिन् पाँचौँ विवाह ! लकडाउनमा आफ्नै अंगरक्षकसँग बसेको थियो प्रेम
प्रकाशित मिति: १५ माघ २०७७, बिहीबार January 28, 2021 , संवाददाता: Yukta
एजेन्सी । हलिउड अभिनेत्री पामेला एन्डरसन एक पटक फेरि आफ्नो विवाहको कारण चर्चामा छिन् । उनले पाँचौ पटक विवाह रचाएकी छिन् । चाखलाग्दो कुरा यो हो कि पामेला एन्डरसनले उनकोअंगरक्षक डान हयहुर्स्टसँग पाँचौं पटक विवाह गरेकी छिन् । उनले आफैंले[…..]
हलिउडको फिल्मी यात्रामा नेपाली अञ्जली लामा
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०७७, मंगलवार , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । नेपालकी ट्रान्सजेण्डर मोडल अञ्जली लामाले हलिउडमा निर्माण हुन लागेको एक महिला प्रधान फिल्ममा अभिनय गर्ने भएकी छन् । हलिउडका ६ महिला निर्देशकले निर्देशन गर्ने ६ कथाको फिल्ममध्ये एक फिल्ममा अञ्जलीले अभिनय गर्ने भएकी हुन् । समाचारअनुसार अञ्जलीले लीना[…..]